VPSA Umshini Oxygen generator - China Hangzhou Poly Air Comment Izixhobo
umgaqo Ukusebenza of VPSA xi swing adsorption oxygen generator 1. Awona macandelo aphambili emoyeni ezi-nitrogen neoksijini. Nitrogen neoksijini zezulu intsebenzo adsorption ezahlukeneyo zeolite (ZMS) kwiqondo lobushushu kokugquma (oxygen nga wendele nge-nitrogen). Nitrogen on zeolite ezinto ukukwazi yokugalela adsorption ilunge ngaphezu oksijini (nitrogen ion kunye yokugalela molekyuli umphezulu anamandla), xa uxinzelelo lomoya xa likarhulumente zeolite beemolekyuli ngesihlungulo adsorbent adsorptio ...
umgaqo Ukusebenza of VPSA xi swing adsorption oxygen generator
1. Awona macandelo aphambili emoyeni ezi-nitrogen neoksijini. Nitrogen neoksijini zezulu intsebenzo adsorption ezahlukeneyo zeolite (ZMS) kwiqondo lobushushu kokugquma (oxygen nga wendele nge-nitrogen). Nitrogen on zeolite ezinto ukukwazi yokugalela adsorption ilunge ngaphezu oksijini (nitrogen ion kunye yokugalela molekyuli umphezulu anamandla), xa uxinzelelo lomoya xa likarhulumente zeolite beemolekyuli ngesihlungulo adsorbent adsorption ebhedini, nitrogen ngu eziphilayo yokugalela adsorption, ngaphantsi ioksijini ngu adsorption, yoxinaniso nokuhamba adsorption ukhuko kwisigaba negesi, i-oksijini nitrogen yokungcola oksijini. Xa sefu molekyuli adsorbs nitrogen Ukwanda, umoya wayeka kwaye yengcinezelo kwebhedi adsorption lifinyele. I-nitrogen lilo sefu molekyuli kuyahlaziywa kwaye sefu molekyuli yi neenkcukacha zeposi kwaye anokuphinda asetyenziswe. I-oxygen ingaveliselwa rhoqo xa isenza i phakathi iibhedi ezimbini okanye ngaphezulu adsorption.
Iqondo oksijini nitrogen usondele, yaye ezimbini nzima ukwahlukanisa. Ngoko ke, uxinzelelo swing adsorption isixhobo kwezigqibo umoya awukwazi ukufumana kuphela 90-95% ioksijini (ukufumaneka ezimbi polar ioksijini yi 95.6%, kwaye ezinye i argon). Xa kuthelekiswa neyunithi yokuzahlula umoya cryogenic, akwazi ukuvelisa ngaphezu kwe-99,5% oksijini ingqalelo.
1. Le adsorption umandlalo yengcinezelo adsorption swing okohlukahlukana air oxygen izityalo kufuneka iqulathe amanyathelo ezimbini ukusebenza; Adsorption nokusonjululwa. Ukuze ufumane igesi imveliso rhoqo, iibhedi ngaphezu ezimbini adsorption zikholisa efakwe kwi izixhobo ekwenzeni ioksijini-, yaye amanye amanyathelo abangabancedani ayimfuneko kwakhona Banduluka ngokwembono ukusetyenziswa kwamandla kunye nozinzo. umandlalo adsorption nganye ngokubanzi kufuneka zidlule amanyathelo adsorption, decompression, vacuuming okanye decompression ngokutsha, ukutshintshwa ukuhlisa kunye noxinzelelo umfutho, ize iphindwe imisebenzi njalo. Kwangaxeshanye, umandlalo adsorption ngamnye amanyathelo operation ezahlukeneyo. Phantsi kolawulo PLC, kukusebenza leebhedi adsorption eziliqela nga ulungelelaniswe kwaye kohlulwa kwi amanyathelo, kangangokuba isixhobo xi swing adsorption nga kuqhuba kakuhle kwaye ufumane igesi lwemveliso ngokuqhubekayo. Kuba inkqubo ukwahlukana kanye, amanye amacandelo umkhondo emoyeni kufuneka zithathelwe ingqalelo. Le adsorption amandla icarbon dioxide namanzi phezu adsorbent eqhelekileyo likhulu kakhulu ngokubanzi ngaphezu kwe-nitrogen neoksijini, leyo isuswe ngokuzalisa le ebhedini adsorption kunye adsorbent efanelekileyo (okanye adsorbent ngokwenza ioksijini-ngokwalo).
Inani iinqaba adsorption ezifunekayo izixhobo imveliso ioksijini kuxhomekeke kwisikali kwemveliso ioksijini, ukusebenza adsorbent kunye noyilo inkqubo. Ukuzinza ukusebenza yokusebenza multi-Tower engcono, kodwa utyalo zixhobo eliphezulu. Isiqhelo yangoku ukusebenzisa ioksijini sorbent kakhul ukunciphisa inani ezinde adsorption kwaye usebenzise okwexesha elifutshane yokusebenza ukuphucula ukusebenza yunithi kunye ukugcina utyalo-mali kangangoko kunokwenzeka.
1. Inkqubo izixhobo Simple
2. Isikali yemveliso oxygen ngezantsi 10000m3 / h, kwaye ukusetyenziswa kwamandla lisezantsi kwaye mali incinane;
3. Isixa kwezobunjineli basekuhlaleni lincinane, kwaye ixesha ukufakela isixhobo mfutshane kunolo device cryogenic;
4. Iindleko Low ukusebenza zokusebenza kunye nokugcina;
5. Le fowuni unezinga eliphezulu esizisebenzelayo isebenza, elula nekhawulezayo ukuvula kwaye uyeke, kwaye kukho inani elincinane baqhubi;
6. Le fowuni ine uzinzo operation olomeleleyo kunye nokhuseleko phezulu;
7. ukusebenza Simple, yaye iindawo eziphambili zonke kbavelisi ezaziwa ngamazwe;
8. oksijini ukusefa emolekyuli ngaphandle kunye yokusebenza ophezulu nobomi inkonzo ende;
9. nezimo zokusebenza Strong (umgca umthwalo ophezulu nesantya ukuguqulwa fast).
ubukhulu 1. Product: 100-10000nm3 / h
2. Oxygen ntumbuluko: 90-94% okanye ngaphezulu, leyo zilungiswe ngaphakathi 30-95% Uluhlu ngokweemfuno umsebenzisi.
3. ukusetyenziswa Power yemveliso ioksijini: xa ntumbuluko mpilo-90%, i-power ajikwa oxygen olusulungekileyo 0.32-0.37kwh / Nm3
uxinzelelo 4. oksijini: hayi ngaphezulu kwe 20kpa (kungenziwa xinzelelo)
5. Amandla: inkulu kune okanye ilingana ne 95%
Oluzenzekelayo Psa losele Oxygen Generator
IiBhalbhu Medical Psa Oxygen Generator
Ichithwe Oxygen Generator
Zomongomoya onyibilikisiweyo Nano Bubble Generator
Ekhaya Oxygen Generator
Ulwelo Oxygen Generator
Oxygen Generator ngokuba Cylinder
Oxygen Generator ngokuba Fish Farming
Oxygen Iperoksayidi Generator
Asonge Oxygen Generator
Zeolite Ezinto aluxhaswanga Oxygen Generator